I-Twitterrific ye-Mac manje isivumela ukuthi sengeze izithombe namavidiyo ukuhambisa imiyalezo | Ngivela kwa-mac
Ngenkathi silinde inyanga kaJuni ukuthi ihlole uma i-Twitter ihlose ukubulala zonke izinhlelo zokusebenza ezivela eceleniUma izinguquko esizimemezele ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi lokho kungasho ukuthi ukuphela kwezicelo ezivela eceleni ziqinisekisiwe ekugcineni, abafana abakuTwitterrific babonakala benezinto ezicacile futhi bazi ukuthi lokhu ngeke kube njalo.
Futhi ngisho lokhu, ngoba into enengqondo kunazo zonke kungaba ukulinda ubone ukuthi inkampani ephethe uJack Dorsey, futhi owayengomunye wabasunguli bayo, qhubeka nezinhloso zakho. Ukubheka ukuthi kuyipulatifomu yabo, noma ngabe ukuzisola kwabo kungadala kangakanani ngezicelo zomuntu wesithathu, yilokho okukhona futhi asikwazi ukwenza lutho.
Abafana abaseTheIconFactory basanda kuvuselela uhlelo lwabo ngokungeza umsebenzi omusha esingaqeda ngawo thumela imilayezo eqondile ngezithombe noma amavidiyo, ngaphandle kokwenza obala njengakuqala. Izithombe noma amavidiyo esifuna ukuwafaka, singawafaka ngqo kusuka ebhodini lokunamathisela, kusuka ku-albhamu yethu yezithombe noma ukwenza ukuthwebula okusheshayo kusuka kusicelo esifanayo somyalezo, ngaphandle kokusebenzisa ikhamera yedivayisi yethu nganoma yisiphi isikhathi.
Lo msebenzi omusha awuveli kuphela esandleni senguqulo ye-macOS, kepha futhi itholakala futhi kunguqulo ye-iOS, ngakho-ke uma usebenzisa zombili izinhlelo zokusebenza nsuku zonke, njengoba kwenza umlobi, unenhlanhla, ngoba lo msebenzi ubungenye yezinto ezifunwa kakhulu ngabasebenzisi. Ngalesi sibuyekezo, izimbungulu ezincane ebezitholakele kusukela i-TheIconFactory ikhiphe isibuyekezo sokugcina sohlelo sesixazululiwe.
Kusukela iTwitter ishiye i- ukuxhaswa kohlelo lwakho lokusebenza lwendabuko ku-macOS, umakhi we-Twitterrrific wehlise intengo yalolu hlelo ibe ngaphezu kwengxenye, ukuze okwamanje sikwazi ukuyithenga ngama-euro angu-8,99 kuphela, ngama-euro angu-21,99 abiza phakathi nezinyanga zokuqala zokwethulwa kwawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » I-Twitterrific ye-Mac manje isivumela ukuthi sengeze izithombe namavidiyo ukuhambisa imiyalezo
I-Apple igubha uSuku Lomhlaba ngokusebenza kukaZiggy Marley